MIUI 12 biara na ozi oma na onyonyo di anya | Gam akporosis
Mgbe ọtụtụ ụbọchị na-eche Xiaomi Fans, anyị mechara nwee ike mara ụdị MIUI ọhụrụ. Ọkacha mmasị kachasị etinyere ọtụtụ ndị gam akporo na-emegharị ọzọ na abata na onyonyo mara mma ma dị ọhụrụ. Ọ bụrụ n ’ịnọ na-eche ihu MIUI 12 taa anyị ga-agwa gị ihe ọhụụ ọ na-egosi anyị.
Ma anyị ga-echere ọnwa zuru ezu iji nwee ike iji ya na-ejikarị na lngwaọrụ ndị nwere ohere imelite. Mana anyị amatalarị atụmatụ MIUI ọhụrụ ga-enwe. A nnọọ "nọ n'ọrụ" oyi akwa nke ahaziri nke ahụ na-enye onyonyo doro anya nke ihuenyo nke smartphones anyị.
MIUI 12, onyonyo gam akporo Xiaomi na-aga n’ihu na-akawanye mma
Ngwurugwu nhazi nke Xiaomi na-enye na ngwaọrụ gam akporo ya ka mgbe niile nwere ezigbo nnabata site na ndị ọrụ ya. Ihe na-anaghị eme na ndị nrụpụta niile họrọ ịnye mmetụ nke ịhazi ya na sistemụ arụmọrụ nke naanị ya dị mma. MIUI 12 profaịlụ ma melite ọrụ ndi anyi nwere na-enye ozi ọma na akụkụ nchebe. Gburugburu ebe a otutu ije na Aims na-enye dynamism na ihe oyiyi na interface nke ihuenyo, ihe na priori ekwesịghị imetụta mmetụta nke ọrụ nke ngwaọrụ n'ụzọ na-adịghị mma.
Onyinyo ohuru nke MIUI juru ya anya. Anyị na-achọta dị nnọọ ndụ "ndụ" na ọ fọrọ nke nta niile ngalaba nke ngwaọrụ menu. Na ego na-agagharị mgbe ịnweta ntọala, mgbe ị na-agbanwe ma ọ bụ na-ehichapụ ngwan'ime menu Nke nhazi. O yiri ka ihe niile na-agagharị n'ime MIUI 12 site na mbido ọ na-ahụ nke ọma ma na-adọrọ anya. Anyị nwere ihe a na-akpọ "Ego" nke na-enye onyonyo pụrụ iche na Xiaomi smartphones na anyị ga-enwe ihe karịrị puku akwụkwọ ahụaja granite.
MIUI 12 nzọ ụkwụ na gosipụta data site na iji ihe eserese eserese na-aghọta na a ilekiri. Na mgbakwunye na a ọnọdụ gbara ọchịchịrị akpọ 2.0 na adapts mma ka ndị ọzọ ngwa. Ndozi ọtụtụ Nke ahụ ga-enyere anyị aka machie ngwa iji hụ mmepe na ezigbo oge nke emeghe ngwa na nke anyị họọrọ ịchịkwa. Nwere ike ikwu na WhatsApp n’echefughị ​​ihe nchọgharị ahụ. Dị ka anyị na-ahụ, ụfọdụ dị nnọọ visual makeovers nke anyị ga-amụkwu nke nta nke nta. MIUI na-emeziwanye ụdị nke nsụgharị, na ihe akaebe nke ihe ịga nke ọma ya bụ ọkwa afọ ojuju nke ọtụtụ ndị ọrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » MIUI 12 ji ozi ọma na ọdịdị dị egwu abịa